उदयपुरमा कसरी को’रोना फैलियो भन्ने पत्ता लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको टोली भुल्केमा – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/उदयपुरमा कसरी को’रोना फैलियो भन्ने पत्ता लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको टोली भुल्केमा
उदयपुरमा कसरी को’रोना फैलियो भन्ने पत्ता लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको टोली भुल्केमा
काठमाडौं : उदयपुरको भुल्केमा को;रोना सं’क्रमण बढे पछि सं’क्रमणको जरा खोतल्न विश्व स्वास्थ्य संगठन सहितको टोली अनुसन्धानको लागि भुल्के पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीका अनुसार बिहीबार पुगेको टोलीले एक हप्ताभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने हिसाबले काम सुरु भएको छ। टोलीमा एक जना विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि सहित चार जना जनस्वास्थ्य विज्ञ छन्।
‘उहाँहरूले एक हप्तामा संक्रमण कसरी फैलियो, संक्रमणको फैलावट कहाँसम्म पुग्ने भनेर रिपोर्ट पेस गर्नुहुन्छ,’ उनले भने। अहिले उक्त टोली संक्रमण फैलिएको भुल्केमै पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। गत शुक्रबार भुल्केस्थित एक मस्जिदमा रहेको १६ जनामध्ये १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। बाँकी चार जनामा पछि संक्रमण पुष्टि भएपछि सो क्षेत्रलाई उच्च जो’खिमको रुपमा लिइयो।
लगत्तै वस्तीमा रहेका मानिसहरूको पनि परीक्षण गर्ने प्रकृयामा १२ जनामा कोरोना पुष्टि भयो। त्यसलगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनसहितको टोली संक्रमण कसरी फैलियो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्न सो वस्ती पुगेको हो । अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानले जमाती समूहबाट भन्दा पनि भारतबाट आएका स्थानीय युवकबाट संक्रमण फैलिएको भन्ने आशंका गरिएको छ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख डा. मोहन सुवेदीले जमाती समूहका व्यक्तिहरू चार महिनाअघि नै नेपाल आएको कुराले सो समूहबाट संक्रमण फैलिएको हुन नसक्ने बताए। उनका अनुसार फागुन तेस्रो साता भारतबाट आएका भुल्केकै एकजना स्थानीय युवकबाट संक्रमण फैलिएको हो कि भन्ने अनुमान छ। भारतबाट आएका उनको मस्जिदमा निरन्तर आवतजावत भएको पाइएको छ। मस्जिद नजिकै घर भएकाले मस्जिद आउजाउ गरिरहन्थे।
यस्तै दुबईबाट आएका एक स्थानीय युवकलाई पनि संक्रमण देखिएपछि उनीबाट पनि सं’क्रमण फै’लिएको हुनसक्ने भनेरथप अनुसन्धान बढाइएको छ। अहिले उदयपुरको भुल्केमा मात्र २८जना को;रोना संक्रमित फेला परेका छन्। उनीहरूको विराटनगर स्थित को रोना अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गत शुक्रबारदे खि नै भुल्के वस्ती सिल छ। वस्तीमा खाद्यवस्तु देखि सबै कुरा नगरपालिकाले व्यवस्था गर्दै आएको छ। आज मात्र वस्तीमा स्वास्थ्य शिविर समेत सञ्चालन गरिएको छ। वस्तीमा रहेका दिर्घ रोगी, औषधि सेवन गरिरहेका विरामीहरुको स्वास्थ्य जाँच गरिएको डा. सुवेदीले बताए।
वर्षा लेख्छिन्–‘यहाँ पाइला पाइलामा मानसिक तनाव भोग्नुपर्छ’
भारतकै शान्त नायिका हुन् सुन्दरी क्याट्रिना, उनी यति सरल छिन् की जति नै तारिफ गरेपनि कम हुन्छ